မင်းဘူးခရိုင် မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချ ~ Myaylatt Daily.
မင်းဘူးခရိုင် မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချ
Tun Tauk added4new photos. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
မင်းဘူးခရိုင် မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးများအား
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ့
မှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးများအား
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပိုချ ခြင်းအား ၂၈၊၅၊၂၀၁၅ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကာညနေပိုင်းအထိ မင်းဘူး/စကုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပိုချရာတွင် မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကာ မင်းဘူး/စကုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ဥက္ကဌဦးတင်ဝင်းမှဆွေးနွေးမှာကြားပြီး မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိ ဦးတင်ခိုင်ဇော်မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်၊
သင်တန်းပို့ချအပြီး မင်းဘူး/စကုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌဦးတင်ဝင်းမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူးပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့မြို့
နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုများမှတက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုများမှတက်ရောက်လာတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့များအနေဖြင့်ယခုသင်ကြ
လေ့လာပြီး မိမိတို့နှင့်ဆက်နွယ်သည့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံ၍ဆွေးနွေးပွဲများပြု လုပ်ကာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ပြု လုပ်ထားကြပါဟုပြောကြားသွားသည်၊
အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပိုချပွဲသို့ ခရိုင်/မြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌများနှင့်အတွင်းရေးမှူးများ ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ဥက္ကဌများနှင့်အတွင်းရေးမှူးများ နိင်ငံရေးပါတီများ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ သတင်းမီဒီယာများ စုစုပေါင်း၁၇၀ဦးခန့်တက်ောက်ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။